Buza uchwepheshe we-Semalt How to Remove Google Analytics Spam
Ngeke kube yiphutha ukusho ukuthi ukubika kungenye yezici ezibaluleke kakhulu zokumaketha okungenayo, futhi idatha ethembekile iyisihluthulelo sokuphumelela ekubikeni. Ngezinye izikhathi kudeshibhodi yethu ye-Google Analytics, siyabona ukuthi inani elikhulu lezinhlamvu liza. Ziyi-bots empeleni ezithuthukisiwe futhi kufanele zilahlekelwe ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kufanele sihlole njalo amarekhodi ethu ukuze sihlaziye futhi sixazulule inkinga ngaphambi kokuphuza kakhulu futhi silahlekelwa isayithi lethu kubaduni.
I-Artem Abgarian, iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Ephezulu Semalt , ichaza lapha ngezinyathelo zokususa ugaxekile ogaxekile ngokushesha.
Ngaphambi kokulungisa izilungiselelo zakho ku-Google Analytics, kufanele uhlole zonke izihlungi ezikhona bese wenza izinguquko ezifanele. Lokhu kuzokusiza ukuthi usebenzise amasu angcono. Ungaqala inqubo ngokuhlola inombolo yemibono oyitholayo. Uma usuhlolile, isinyathelo esilandelayo ukuvimbela ithrafikhi yogaxekile nemithombo yawo. Kuyiqiniso ukuthi kunezindlela eziningi zokuvimbela ithrafikhi yogaxekile namabhodlela, kodwa indlela elula ukuvumela i-Google ukuba yenze umsebenzi wakho. Iya kwesigaba se-Admin bese ulungisa izilungiselelo zakho ze-Bot Filter. Ngale ndlela ungavimbela ukufika kwezimoto okungezona ezingokoqobo nezokukhohlisa kakhulu. I-Google ivuselela njalo izinkinobho zayo zokuhlunga kanye nezinqubomgomo zokusiza abakwa-webmasters bathole izinzuzo eziphezulu kusuka kwimithombo yabo.
Iyini ithrafikhi yogaxekile nokuthi ingayithola kanjani?
I-traffic spam inamandla okudlela namafayela akho..Iqala inqubo yayo ngokuthumela izimoto ezingenalutho nokubukwa okungalungile. Uma ubona izivakashi eziningi futhi ungazazi imithombo yabo, kunamathuba ukuthi ugaxekile uthinte isayithi lakho. I-traffic spam ithunyelwa yizinhlobonhlobo ze-botnets nama-spambots athuthukiswe abaduni be-top-notch ukuze babambe ulwazi lwakho lomuntu siqu.
Kunezindlela ezahlukene zokuhlaziya, ukukhomba nokulahla ugaxekile. Okokuqala, kufanele ulungise izilungiselelo kudeshibhodi yakho ye-Google Analytics. Kufanele futhi udale amafayela wokulondoloza ukuze idatha yakho ingalokothi ilahleke. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuhlola uma izinga lakho lokunciphisa kanye neseshini lewebhu lifika kumaki noma cha.
Akukhona lokhu kuphela kodwa futhi kufanele uhlole uphinde ulungise ama-hostnames akho ahlangene ne-Google. Uma ubona ukuthi i-Googleweblight iyingama lakho lemphathi, kuyinto enhle ukuhamba nayo. Uma kungenjalo, kufanele usishintshe ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Indlela yokuvimbela ithrafikhi yogaxekile
Enye yezindlela ezilula futhi ezingcono kakhulu zokuvimbela ithrafikhi yogaxekile ngokudala imifanekiso yezihlungi njalo. Lokho kufanele kube negama lakho lesizinda, igama lefayela, kanye negama lomphathi. Qinisekisa ukuthi unike amagama ahlukene kumawebhusayithi ahlukene noma ezizindeni ukugwema ukudideka. Kufanele usethe uhlobo lokuhlunga olwenziwe ngokwezifiso bese ufaka amagama we-hostnam lapha. Isinyathelo esilandelayo ukuqinisekisa zonke izihlungi ngaphambi kokuba uzisebenzise kumasayithi akho.
Kuyiqiniso ukuthi kunezinhlobo eziningi zemithombo yogaxekile. Okudingeka ukwenze ukuvimbela yonke yale mithombo ngamunye. Hlanza ideshibhodi yakho ye-Google Analytics bese uyihlola kahle ngaphambi kokudala izihlungi nokuvimbela imithombo yogaxekile. Uma usulandele lezi zinyathelo, kungaba lula kuwe ukuqeda ithrafikhi yogaxekile. Qinisekisa ukuthi uvimbele wonke ama-IP asolisayo ekuthumeleleni i-traffic fake njengoba ingalimaza isayithi lakho ne-AdSense ngezinga elikhulu.